सेयर भाउ बबल भएकै हो त ? एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले गत साता एक कार्यक्रममा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीको सेयर भाउ बबल भएको सार्वजनिकरूपमै उद्घोष गरे ।
पाँच करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको लघुवित्त कम्पनीको भाउ पाँच हजार पुग्ने तर आठ अर्ब चुक्ता पुँजी पुग्न लागेका वाणिज्य बैंकको सेयर भाउ पाँच सय हाराहारीमा रहेको भन्दै गभर्नर डा. नेपालले माइक्रोफाइनान्सलाई अझै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने आशय देखाए ।
गभर्नरको यो सार्वजनिक भनाईको विभिन्न तह र तवरबाट टिकाटिप्पणी अनि विश्लेषण पनि भइरहेको छ । यो त माइक्रोफाइनान्सका विषयमा गभर्नरको खुला टिप्पणी भयो,
यतिबेला समग्र बजारमा कम्पनीहरूको सेयर भाउ कम हो, ठीकै हो वा बढी भयो भन्नेमा विभिन्न विश्लेषक, आमलगानीकर्ता अनि सञ्चारमाध्यमबाट आआफ्नै ढंगले विश्लेषण भइरहेको छ ।
बजारमा यस्ता विश्लेषण आइरहँदा साना र मध्यमस्तरका लगानीकर्ता भने अन्योलमा परेका छन् । कुन कम्पनी वा समूहको सेयर महँगो हो, अनि कुन समूहको सस्तो छ ? यतिबेला सेयर किन्ने, होल्ड गर्ने वा बिक्री के गर्ने भन्ने अन्योल पनि धेरै लगानीकर्ता छाएको छ ।
लगानीकर्ताको यही जिज्ञासालाई मेटाउन नेपाली पैसा रिसर्च टिमले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका सबै समूहको औसत मूल्य–आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) र खुद आम्दानी वृद्धिदरको गहन अध्ययन गरी त्यसको निचोड सार्वजनिक गरेको छ ।
गत बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कायम बजार भाउको आधारमा पीई निकालिएको हो । कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्दा प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, इक्विटीमा प्रतिफल, इन्डस्ट्री ग्रोथ रेट, व्यवस्थापन, व्यापार, भविष्यको सम्भावनालगायतका सूचक महत्वपूर्ण हुन्छ ।
जीवन बिमा, यस्तो छ पीई र नाफा
हाम्रो अध्ययनमा मूल्य आम्दानी अनुपातका आधारमा सबैभन्दा महँगो सेयर जीवन बिमा कम्पनीहरूको देखिएको छ । जीवन बिमा कम्पनीहरूको औसत मूल्य
आम्दानी अनुपात (पीई) ३०१.४१ गुणा छ । मूल्य आम्दानी अनुपात उच्च रहेको यो समूह (उद्योग) को खुद नाफाको वृद्धिदर भने ३८.०७ प्रतिशतले नकारात्मक भइसकेको छ ।
जीवन बिमा कम्पनीहरूमा लगानीकर्ता झुमिरहँदा पीई र यो उद्योगको समग्र कमाई बारेमा ख्याल गर्न आवश्यक देखिएको छ । सेयर बजार बुलिस ट्रेन्डमा लागेपछि जीवन बिमामा लगानीकर्ताको निकै आकर्षण रहँदै आएको हो ।
कस्तो छ होटेल समूहको अवस्था ?
जीवन बिमापछि पीई उच्च हुनेमा दोस्रो स्थानमा होटेल समूह परेको छ । यो समूहको औसत पीई रेसियो १५१.७१ गुणा छ । जबकी होटेलहरूको नाफाको ग्रोथ रेट ५०.०९ प्रतिशतले नकारात्मक देखिएको छ ।
पुँजी बजारमा सूचीकृत होटेलहरूमध्ये सोल्टीको सेयरमा पहिलेदेखि नै लगानीकर्ताको आकर्षण बढी देखिन्छ । अन्य होटेलहरूको पनि कारोबार राम्रै छ । तर पछिल्लो भाउ अनुसार पीई उच्च देखिन्छ ।
टेलिकमले नेतृत्व गरेको अन्य समूहमा हेरौ त अवस्था
पीई उच्च हुनेमा तेस्रो नम्बरमा अन्य समूह परेको छ । यो समूहमा नेपाल टेलिकमको वर्चस्व छ । अन्य समूहको औसत पीई ६३.३५ गुणा हुँदा कम्पनीहरूको खुद नाफाको ग्रोथ १६.६८ प्रतिशतले नकारात्मक भएको छ ।
बजारमा नेपाल टेलिकमको सेयर भाउ निकै सस्तो रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । टेलिकमको मात्रै पीई हेर्दा सस्तो पनि देखिन सक्छ । तर विश्लेषण गरेर लगानी गर्नेहरूको टेलिकममा खासै झुकाव नहुनुका पछाडि यही नकारात्मक वृद्धिदर प्रमुख कारण देखिन्छ ।
टेलिकमले वार्षिक औसतमा ४० देखि ५० प्रतिशत हाराहारीमा लाभांश दिंदै आएको छ । यो कम्पनीको आगामी वर्षहरूमा खुद नाफा वृद्धिदर त्यति धेरै माथि गइहाल्ने देखिंदैन ।
अन्य समूहको पीई निकै माथि हुनु अनि ग्रोथ रेट चाहिँ निकै कम देखिनुमा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी प्रमुख कारण हो ।
यो कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी थोरै छ । त्यस अनुपातमा पीई भने निकै बढी छ । आठ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी भएकाले अन्य समूहमा टेलिकमपछि यसको दबदबा बढी छ ।
गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार यो कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २.५४ रूपैयाँ हुँदा पई रेसियो १७०.४६ गुणा छ । यही कारण यो समूहको समग्र पीई उच्च हुन गएको हो ।
भ्यालू इन्भेस्टरहरू कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्दा सम्बद्ध कम्पनी वा इन्डस्ट्रीको भविष्यमा कस्तो ग्रोथ (वृद्धि) हुन्छ भन्नेतर्फ निकै चनाखो हुने गर्छन् ।
गभर्नरले हट इस्यिू बनाएका माइक्रोफाइनान्सको यस्तो छ कमाई
हाम्रो रिसर्च टिमको अध्ययनमा माइक्रोफाइनान्स (लघुवित्त) कम्पनीहरूको औसत पीई ६०.७८ गुणा रहेको पाइयो । अनि, यस समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको खुद नाफा वृद्धिदर ४३.३८ प्रतिशत देखिन्छ ।
यसआधारमा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीकोको मूल्य आम्दानी अनुपात उच्च हुँदै गर्दा इन्डस्ट्रीको नाफा वृद्धिदर पनि उच्च नै रहेको देखिन्छ । नाफा बढ्दै जाँदा लगानीकर्ता यो समूहमा आकर्षित भइरहेका छन् ।
माग बढ्दा मूल्य पनि बढेको हुन सक्ने देखिन्छ । माइक्रोफाइनान्सको नाफा राम्रै भए पनि पीई उच्च देखिन्छ । माइक्रोफाइनान्सको सेयर महँगो भयो वा ठीकै छ भन्नका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीसँग तुलना गर्दा बढी उपयुक्त हुन सक्छ ।
निर्जीवन बिमा कम्पनी
पछिल्लो समय पुँजी बजारमा निकै हट केक बन्दै गएको अर्को समूह हो, निर्जीवन बिमा कम्पनी । निर्जीवन बिमा कम्पनीको भाउ एक वर्षयता लगातार चुलिंदोक्रममा देखिन्छ । कस्तो छ त निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको वृद्धिदर ?
हाम्रो रिसर्चले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको औसत पीई ५१.०३ गुणा देखाएको छ । जबकी ५१ गुणा हाराहारीमा पीई हुँदा यो समूहका कम्पनीहरूको खुद नाफाको औसत वृद्धिदर चाहिँ ४०.७४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
यो तथ्यांकले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको कमाई पनि बढ्दै गएको स्पष्ट पार्छ । सोही अनुपातमा पीई पनि उच्च हुँदै गएको छ ।
अब हाइड्रोपावर समूहलाई हेरौं । पुँजी बजारमा सूचीकृत हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको औसत पीई रेसियो ४७.७२ गुणा रहेको छ ।
पीई ४७ गुणा हाराहारीमा हुँदा हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको खुद नाफामा औसत वृद्धिदर १८.३३ प्रतिशत पुगेको छ । यो तथ्यले हाइड्रोपावर समूहको औसत पीई उच्च हुँदै गएको तर त्यस अनुपातमा नाफा वृद्धिदर अलिसुस्त देखिन्छ ।
वाणिज्य बैंक समूह, पीई ३२.६ हुँदा नाफा ४१.१६ प्रतिशत
सेयर बजारमा सबैभन्दा बढी हिस्सा बैंक तथा वित्तीय समूहको छ । त्यसमा पनि वाणिज्य बैंक समूहले बजारको नेतृत्व गर्दै आएको छ ।
समग्र बजारलाई बुल वा वियरिस बनाउने भन्ने हात पनि वाणिज्य बैंक समूहकै हुने गरेको छ । पछिल्लो समय नेप्से १८८१ अंकको अहिलेसम्मको उच्च विन्दु पनि वाणिज्य बैंक समूहको सेयर भाउ बढेपछि मात्रै सम्भव भएको हो ।
त्यसो हुँदा, वाणिज्य बैंकहरूको औसत पीई रेसियो र औसत खुद नाफा वृद्धिदरका बारेमा धेरैलाई चासो हुनु स्वभाविक हो ।
बजारमा कायम पछिल्लो भाउ अनुसार वाणिज्य बैंक समूहको पीई ३२.६८ गुणा छ भने बैंकहरूको औसत खुद नाफा ४१.१६ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यले वाणिज्य बैंकहरूको पीई भन्दा कमाई अझै बढी रहेको देखाउँछ ।
माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरूसँग तुलना गर्ने हो भने चाहिँ वाणिज्य बैंक नै सुरक्षित देखियो । किन भने वाणिज्य बैंकको खुद नाफा वृद्धिदर लगभग बराबरीकै हाराहारीमा हँुदा पीई भने माइक्रोफाइनान्सको वाणिज्य बैंकको भन्दा झन्डै दोब्बर रहेको छ ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी
वाणिज्य बैंकहरूपछि विकास बैंकलाई अध्ययन गरौं । विकास बैंक समूहको औसत पीई २१.९२ गुणा पुगेको छ । तर विकास बैंकहरूको खुद नाफा ६८.१८ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ ।
यस्तै, फाइनान्स कम्पनीहरूको औसत पीई १८.०७ गुणामात्र छ तर खुद नाफा ५९.५५ प्रतिशत पुगेको छ । पीई र नाफा अध्ययन गर्दा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले निकै ठूलो सफलता हासिल गर्दै गएको देखिन्छ ।
विगतमा अधिकांश विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी थला परेका भए पनि अब यी समूहका संस्थाहरूको विस्तारै वित्तीय सूचक सबल हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
उत्पादनमूलक, सबैभन्दा कम पीई उच्च नाफा
हाम्रो रिसर्चले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सबै समूहमध्ये सबैभन्दा कम पीई अनि सबैभन्दा बढी औसत खुद नाफा चाहिँ यही उत्पादनमूलक समूहमा रहेको तथ्य फेला पार्यो ।
यो समूहको औसत पीई जम्मा १७.४२ गुणा छ । तर, इन्डस्ट्री नेट प्रोफिट ग्रोथ ८३.०५ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
उत्पादनमूलक समूहमा युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको वर्चस्व छ । अहिले सेयर बजारमा सबैभन्दा महँगो भाउ पनि यही कम्पनीको छ । यसबाहेक हिमालयन डिलस्टिलरी पनि यही समूहमा पर्छ ।
बजार विश्लेषक तथा अर्थशास्त्रीहरू पीई उच्च हुँदैमा सेयरमा जोखिम भइहाल्छ भन्ने मतसँग पूरै सहमत हुँदैनन् । राम्रा अनि भविष्यमा आकर्षक वृद्धिको सम्भावना भएका कम्पनीहरूको पीई जहिल्यै बढी हुने गर्छ ।
संसारकै महँगो ब्रान्डमा पर्ने एप्पलको पीई अन्य कम्पनीहरूको तुलनामा उच्च नै हुने गरेको छ । हामीकहाँ पनि विगतमा स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पीई अन्य वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा बढी थियो ।
हाम्रो बजारमा पनि माइक्रोफाइनान्स, निर्जीवन बिमा कम्पनीको पीई तुलनात्मकरूपमा धेरै देखिएको छ । साथसाथै, खुद नाफा वृद्धिदर पनि उच्च नै देखिन्छ ।
तर जीवन बिमा कम्पनी, होटेल र टेलिकमको नेतृत्व रहेको अन्य समूहमा भने पीई उच्च त छ नै, खुद नाफा वृद्धिदर भने नकारात्मक भइसकेको अवस्था छ ।
कुनै पनि कम्पनी वा समूहको सेयर भाउमा कम्पनीको नाफासँगै सरकारी नीति, नियामक निकायले बेलाबेलामा जारी गर्ने निर्देशन, ब्याजदरसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र, राजनीतिक वातावरण तथा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने गर्छ ।
यसर्थ, स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत बाँकी सबै समूह र ती समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको भाउ सस्तो वा महँगो भन्नेमा आआफ्नै तरिकाले बहस भइरहँदा हामीले चाहिँ समग्र अध्ययनसहितको तथ्य पाठकसामू ल्याएका हौं ।
कुन कम्पनी राम्रो ? कुन कम्पनीको सेयर किन्ने वा बेच्ने भनेर विश्लेषण अनि निर्णय गर्ने जिम्मा भने पाठककै हातमा छाडिदिएका छौं ।
सूचीकृत समूह औसत पीई उद्योगको खुद नाफा वृद्धिदर (प्रतिशतमा)
जीवन बिमा ३०१.४१ (३८.०७)
होटेल १५१.७१ (५०.०९)
अन्य ६३.३५ (१६.६८)
लघुवित्त ६०.७८ ४३.३८
निर्जीवन बिमा कम्पनी ५१.०३ ४०.७४
जलविद्युत ४७.७२ १८.३३
वाणिज्य बैंक ३२.६८ ४१.१६
विकास बैंक २१.९२ ६८.१८
फाइनान्स १८.०७ ५९.५५
उत्पादनमूलक १७.४२ ८३.०५
(नोट : मर्ज तथा अन्य कारणले हाल कारोबार रोकिएका कम्पनीलाई अध्ययनमा समावेश गरिएको छैन । )